Woopra: Chaiyo-nguva, Inogoneka Kuteedzera Kwevatengi | Martech Zone
Woopra chiri analytics chikuva chinotarisa pane ako tarisiro uye vatengi, kwete kuona peji. Iyo inogadziriswa zvakanyanya analytics chikuva chinotarisa mukudyidzana kwevatengi newebsite yako - kwete kungori nzira dzavari kutora. Njere dzakapihwa dzinogona kukubvumidza iwe kushandisa chaiyo-nguva dhata kutyaira chaiwo-nguva zviito.
Zvimwe zve Woopra's yakasarudzika chikuva maficha:
Vatengi Mapepa - Ziva vatengi vako neemail uye wobva wawedzera mazita avo kum profiles. Sanganisa data revatengi zvakananga mumaprofile eWoopra kuti uzviite zvebhizinesi rako. Sunga data senge account account yemushandisi, nhoroondo yekutenga, kana imwe data rezinga revatengi. Tekinoroji yaWoopra inototeedzera vatengi kumahombekombe akawanda. Sezvo iri chaiyo-nguva, iwe unogona kuona ndiani ari pane yako saiti izvozvi.
Automated uye Tsika Mishumo - Mishumo inogadzirwa otomatiki zvichienderana nedata iwe rauri kuteedzera. Woopra ichagadzira otomatiki mari kana mishumo yevatengi yakarongedzwa nemazuva, vhiki, mwedzi, zvikamu, maSKU, zvikamu, kana mapurojekiti aunowedzera vatengi vako.
Shanduko Mafuri - Nongedzera kudonhedza kwakakura munzira yako yekutendeuka uye uone kuti ndeapi nhanho vatengi vako vari kusiya. Ziva kuti vatengi vanopedza nguva yakareba sei pakati pechinangwa chimwe nechimwe, tarisa zvikamu zvako zvakanakisa uye zvakaipisisa zvekushandura uye enzanisa mutero wevatengi nechikamu kana chirongwa.
Kuchengetedza Kwevatengi - Enzanisa kuti unochengetedza zvakadii mapoka evatengi vakatanga kushandisa chigadzirwa chako panguva imwechete (zuva, vhiki, kana mwedzi). Izvi zvinokutendera kuti iwe uone maitiro ekuchinja mune chako chigadzirwa kana zvipiriso zvave nazvo pane yako mutengi base.
Zviitiko Zvinokonzeresa - Tumira email, gadziridza yako mutengi chimiro kana kusanganisa zvimwe zviito neWoopra's Webhooks.
Zvionere wega kuti nei anopfuura makambani zviuru zvitatu achisarudza Woopra. Tanga 30-zuva yemahara kuyedzwa kana kuronga demo navo Kwete makadhi echikwereti, hapana zvisungo.
Tags: Analyticskupindukakutendeuka fanerakutendeuka kuteedzeramutengi analyticskuchengetwa kwevatengichikamu chevatengimutengi kuteedzerafaneli yekubikafaneli inoshumakuongorora kwekuchengetedza
Cinegif: Dhizaini maCinemagraphs uye Mhuka dzeMhuka
Meltwater Buzz Dzidzo: Kuratidzira, Kukosha uye Chiremera
Gumiguru 1, 2013 na7: 13 PM
Mhoro, maita basa.
Kana iwe waifanira kutumidza vatatu vakwikwidzi kuWoopra, vaizove vanaani?
Mar 3, 2015 pa 3: 34 PM
Kutenda nekutarisa. Ini ndinofunga kuti Woopra, ine yayo chaiyo nguva analytics, ndiyo yakanaka imwe nzira kuGoogle Analytics. Ini zvakare ndinoisanganisa neayo analytics yakapihwa neyangu livechat, Visitlead, saka zviri nyore kuwana hukama. Chikamu chakanakisa ndechekuti hapana chikonzero chekuchibatanidza, zvese zvakakosha zvinoendeswa zvakananga kuWoopra. https://visitlead.com/plugins/analytics-woopra/